Apple က iPhone ကို 6S နှင့် 6S Plus အားဘက်ထရီမီတာကိုလှညျ့စားကြောင်းဝန်ခံခြင်း - သတင်း Rule
Apple က iPhone ကို 6S နှင့် 6S Plus အားဘက်ထရီမီတာကိုလှညျ့စားကြောင်းဝန်ခံခြင်း
ကုမ္ပဏီနေ့စွဲနှင့်အချိန် setting များကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာမီတာမှားယွင်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ခံဖော်ပြရန်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ထားတဲ့နာရီကို bug ကိုအသိအမှတျပွု
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple က iPhone အတွက် 6S နှင့် 6S ဝန်ခံသည် Plus အားဘက်ထရီမီတာကိုလှညျ့စား” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 18 ဇန်နဝါရီအပေါ်များအတွက် 2016 10.18 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple ကဖုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားတာဝန်ခံတကယ်ရှိပါတယ်အိုင်ဖုန်း 6S သို့မဟုတ် iPhone ကို 6S တွေ့မြင်နိုင်က၎င်း၏စမတ်ဖုန်းဘက်ထရီမီတာနဲ့ bug ကိုမှဝန်ခံခဲ့သည် Plus အားပြသခဲ့ပါသည်.
အဆိုပါအမှားဘက်ထရီမီတာပြသရာခိုင်နှုန်းကို update လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်သည်ဟုဆိုလိုသည်, နေဆဲအပြည့်အဝတာဝန်ခံပြသနေစဉ်ပိတ်ပစ်အချို့အိုင်ဖုန်းမှဦးဆောင်.
Apple ရဲ့အဆိုအရ, အဆိုပါ bug ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အချိန်ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်အချိန်ဇုန်အကြားရွှေ့တဲ့အခါမှာပေါ်လာပါ, တစ်ခုခုအသုံးပြုသူတစ်နေ့ငွေစုအတွက်သို့မဟုတ်ခရီးသွားလာနေစဉ်နာရီပြောင်းလဲနေတဲ့ဘူးလိမ့်မယ်လျှင်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီကပြင်ဆင်ချက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, ဒါပေမယ့်အတောအတွင်းအတွက်အသုံးပြုသူများအပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့အိုင်ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါသင့်ကြောင်း, ထို့နောက် "နေ့စွဲအတွင်း setting အလိုအလျောက်အချိန်ကို enable & အချိန် "setting များကို.
အိုင်ဖုန်း-ထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏အချိန်နှင့်ရက်စွဲကို setting များကိုချိတ်ဆက် bug တွေတစ်သမိုင်းရှိပါတယ်. စမတ်ဖုန်းရဲ့နဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာတစ် bug ကိုများအတွက် အော်တိုမိုဃ်းလင်းငွေစုညှိနှိုင်းမှု နိုးစက်ကိုဖဲ့, အလုပ်အတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ထွက်ခွာ. မိုဃ်းလင်းငွေစုနေတဲ့အဘို့အအပြစ်တင်ဖို့လည်းဖြစ်ခဲ့သည် အတွက် bug ကိုမနှောက်ယှက်ပါ 2013, အိုင်ဖုန်းရဲ့စာသားကိုကိုင်တွယ်အတွက် bug ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမည်သူမဆိုတတျနိုငျသအဓိပ်ပာယျကိုတွေ့စဉ် စမတ်ဖုန်းချက်ချင်း crash တစ်ဦးကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူ.
Apple ကလက်ရှိပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း၎င်း၏ iOS အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းသစ်ကိုစမ်းသပ်နေသည်. အဆိုပါက iOS 9.3 update ကို, စမ်းသပ်သူများမှအများပြည်သူ beta ကိုအတွက်ဖြန့်ချိ, bug တွေကို fix နှင့်တညဉ့် mode ကိုအပါအဝင်အနည်းငယ် features အသစ်တွေကိုထပ်ထည့်ပါလိမ့်မယ် filter များထွက်အပြာရောင်အလင်း အသုံးပြုသူများသည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုကူညီ pair တစုံမျိုးစုံက Apple နှင့်နာရီ တစ်ခုတည်းက iPhone နှင့်အတူ.
Tim Cook က Apple က iPhone အတွက်စမတ်ဘက်ထရီဖြစ်ရပ်မှန်ကာကွယ်, တက '' ဘို့ '' မဟုတ်ဘူးပြောပါတယ်
← Microsoft ကအသစ်ပရိုဆက်ဆာကိုသာ Windows နဲ့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် 10 [Verge] သငျသညျတွှေဒါကအမှုအရာ, ဒါပေမယ့်ဒါဟာ Worth Are [RANKER] →